Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဘယ်လ်ဂျီယံဘောလုံးကစားသမားများ Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Ninja"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်များစွာသော OFF နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကို ON-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုသူကဥရောပအကောင်းဆုံးနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံကွင်းလယ်လူတစ်ဦးကိုသိပေမယ့်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့ Radga Nainggolan ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Radja Nainggolan Antwerp, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက် 4th မေလ 1988 ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့နှောင်းပိုင်းတွင်မိခင်, Lizi Bogaerts Nainggolan နှင့်ဖခင် Marius Nainggolan မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူတို့ကသူ့ကို Radja ပေးသောနည်းလမ်းများအမည်ရှိ "ဘုရင်က" ။ Radga တစ်အမွှာမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ သူ Riana Nainggolan ဟူ. ချေါဝျေါသောမိမိအသုံးဝက်ညီအစ်ကိုအမြွှာညီမနှင့်အတူကြီးပြင်းခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူတို့၏ကလေးဘဝဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံမှာတော့သူဟာ Flemish လူမျိုးစုအတွက်ကြီးပြင်းသော်လည်းသူ၏အင်ဒိုနီးရှားဇာစ်မြစ်မှမှီဝဲတယ်။ အမြစ်များအားဖြင့်, သူသည်အဘိဓါန် Batak နောက်ခံနှင့်ဘာသာရေးအားဖြင့်အင်ဒိုနီးရှား, ထိုအဘိဓါန် Batak ခရစ်ယာန်ပရိုတက်စတဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
Radja နေဆဲရိုမန်ကက်သလစ်ထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဒတ်ခ်ျ, အင်္ဂလိပ်နဲ့အီတလီစကားအဖြစ်ပြင်သစ်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အဖြစ်, Radja သူ့မိဘအကြားတစ်ဦးလြော့နညျးလာဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမျက်မြင်။ သူ့ဖခင်ရဲရငျ့စှာဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် Return ထဲကလမ်းလျှောက်, မိသားစုအပေါ်ထွက်လမ်းလျှောက် အင်ဒိုနီးရှားရန်။ Radja, သူ့မောင်နှမနှင့်သူ၏မိခင်ခဲမဆိုပိုက်ဆံရှိခြင်း, မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။ တစ်မိဘချိုး-up ကနေနေထိုင်ခဲ့ခဲ့သူမဆိုကလေးကသာလွန်းကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်နက်နဲစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုသိကြပါလိမ့်မယ်။ ဤသည် Radja မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များမထိခိုက်စေခဲ့ရသည်။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုရှင်းလင်းစွာသူသည်မိမိငယ်စဉ်ကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌ကြံ့ကြံ့ခံတော်မူသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Radja နှင့်သူ၏အမွှာညီမ Riana နှစ်ဦးစလုံး၏မည်သည့်သို့မဟုတ်အားလုံးကိုအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဘောလုံး wrestle မှသူမ၏မိခင်ဆီကနေအားပေးမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုများသောဒါ, သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို သိ. အဘယ်မှာသူတို့မှလာခဲ့ကြသည်, Lizi Nainggolan သူမ၏လေးတွေဆင်းရဲတွင်းနက်ထဲကရဖို့အတှကျ medium အဖြစ်ဘောလုံးကွင်းကိုမြင်တော်မူ၏။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အနှစ်ချုပ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
သူကငါးအခါဘောလုံးများအတွက် Radja ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုစတင်ခဲ့သည်။ သူ၏နှမအတူသူ Tubantia Borgehout, သူ့မွေးရပ်မြေကနေသေးငယ်တဲ့ကလပ်အတွက်ကစားစတင်ခဲ့သည်။ 10 ၏အသက်အရွယ်မှာသူအပင်ပေါက်ရန်အတွက် Beerschot သည်ဘယ်လ်ဂျီယံထိပ်တန်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူကဘောလုံးသူ့ကိုနှင့်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှာအဘို့အကယ်စင်စစ်အနာဂတ်ကာလခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါဒါကဖြစ်ခဲ့သည်။ Backup တွေကိုရှိသည်နှင့်သူ၏မိခင်စိတ်ပျက်မဟုတ်နိုင်ဖို့အတွက် Radja လေ့လာနေရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ သူနှင့်သူ၏အမွှာညီမ Riana နှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့လူတန်းစားရဲ့ထိပ်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
Radja 2005 သည်အထိပင်ပေါက်ရန်အတွက် Beerschot မှာကနျြရ, သူသည်မိမိလူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုချောမွေ့အဆုံးရှိသည်ဖို့အီတလီစီးရီးအေ B ကိုကလပ် Piacenza ပြောင်းရွှေ့ဖို့သူ့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့ Alessandro Beltrami အားဖြင့်မှတ်ချက်ပြုသောအခါ။ သူ့လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးနောက်သူကသူတို့ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့ရာထူးတိုးတယ်။ 2010 ခုနှစ်တွင်သူတစ်ဦးအငြင်းပွားဖွယ်မရှိပထမဦးဆုံး-ရွေးချယ်မှုအဖြစ်သုံးရာသီအဘို့ကစားဘယ်မှာ Cagliari သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါနဲ့သူ့ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲ Rossoblu အဆိုပါ Sardinian ကလပ်၏သမိုင်းကြောင်းမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားပါဝင်သောထိပ်တန်း 11 စာရင်းထဲတွင်သူ့ကိုအမည်ရှိသောသူ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များတို့တွင်သူ့ကိုအထူးသဖြင့်လူကြိုက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤသည် 2014 ၌သူ၏န်ဆောင်မှုများအတွက်သွားကြဖို့ရိုးမားသတိပေးခံရ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
ဘောလုံးအမှန်ပင် Radja အဘို့ရွှေပင်အသီးဖြစ်၏။ သူအရိပ်တွေ့ရှိရာတစ်ဦးကအရပ်ဌာန ကွာသည်သူ၏ပူပန်ခြင်းအဖြစ်မှန်ကနေဖြေ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပိုပြီးအရိပ်နှင့်ဖြေယူဆောင်တော်မူကြောင်းကိုအခြားရွှေသစ်ပင်ကသူ့ခစျြဇနီးလော်ဒီယာတွေ့ဆုံသည်။
ဂလော်ဒီယာ Nainggolan လိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Radja Nainggolan ၏မယားသည်။ သူမသည်ဆင်းမြေကြီးနှင့်သူမ၏နေ့စဉ်အသက်အဘို့အလွမ်းဆွတ်သူသည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးမှတစ်ရိုးရှင်းပါသည်။
သူမသည်သူမဟု Radga တွေ့ဆုံခဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတယ် ..."ငါသည် Cagliari အတွက် Radja တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးထိုသို့မြင်မြင်ချင်းချစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါသူတစ်ဦးဘောလုံးသမားခဲ့တာနှစ်လအပြီးသင်ယူသည့်အခါကျွန်မအရှုံးမပေးချင်ခဲ့တယ်။ ငါသူတို့အများအပြားအထင်ကြီးလေးစားရှိသည်, ကြွယ်ဝဘောလုံးသမား၏ဘဝအသက်တာကိုပိုပြီးဒါအလုပ်များဖြစ်ပါသည်ငါသိ၏။ အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်မအချိန်ပြည့်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်ငါနေဆဲကြောင့်လက်လွတ်အနည်းငယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူကိုကြည့်ရှုအဖြစ်သူငါ့ကိုချစ်ပြောတယ်အဖြစ်ကြွက်သားနှင့်အမျှကျွန်မပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လည်း, ရှက်ကြောက်စိတ်သတိပြုမိသည်။ သူသည်ရောမသွားခဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုပြောပြတဲ့အခါအရမ်းကောင်းစွာယူခဲ့ပါဘူး။ ရောမမြို့မှာလူတိုင်း Cagliari မတူဘဲစနစ်တကျဝတ်ဆင်ပုံရသည်။ ငါအဆင်ပြေအောင်မှီငါ့ကိုအချိန်ကိုယူ။ တစ်နှစ်ပြီးနောက်, ငါ Sneaker နှင့်အတူထွက်တော့တာပဲ။ ငါနေဆဲငါအချို့သောအမှုအရာလုပ်ဖို့ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအသက်, ရှိခြင်းလက်လွတ်။ "
ဂလော်ဒီယာများနှင့် Radja Nainggolan နှစ်ဦးစလုံး 2011 အတွက်ထုံးချည်နှောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အောက်တွင်Cinecittàကမ္ဘာ့ဖလား, Castel Romano, အီတလီ၏အပန်းဖြေပန်းခြံ၏ခြွင်းချက်နောက်ခံမှာအရပျကိုလုယူသော၎င်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးအမိဝမ်း၏အသီးနှင့်အတူချက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Aysha Nainggolan သူတို့ရဲ့သမီးဇန်နဝါရီလ 30 ၏ 2012th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
ဂလော်ဒီယာကိုအတူတကွအောက်ကပုံထဲမှာစိုက်ပျိုးနည်းနည်းကြည့်တဲ့သူကသူတို့ကလေးနဲ့အတူအသစ်တခုစွန့်စားမှုအဘို့မြို့တော်၌သူ့မေတ္တာ, Radja Nainggolan နောက်လိုက်ဖို့ချစ်တော်မူ၏။
အဆိုပါစုံတွဲသည်ပင် outings စဉ်အတွင်းအိမ်ထောင်ကျချိန်ငါမြင်ပြီကြောင့်လွန်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ, စုံတွဲလူမှုမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်အတော်ကြာရန်တွေ့ရှောက်သွားလေ၏။
အီတလီရဲတပ်ဖွဲ့ကပင်ချိုးဖောက်မှုများ, ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သူ၏ဇနီးဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်မှုများအတွက် Radja Nainggolan ဆန့်ကျင်စွဲချက်ကိုဖိလေ၏။ ဂလော်ဒီယာ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, မိမိတို့ကွဲပြားခြားနားမှုပြင်ဆင်ပြီ။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
ချွတ်စတင်ခြင်း, Radja အင်ဒိုနီးရှားကနေလာတာပါတဲ့သူကသူ့ဖခင် Marianus Nainggolan ထံမှအဘိဓါန် Batak ရဲ့သွေးတယ်သိရသည်။ ဒါဟာ Radja Nainggloan ဆင်းရဲသားမိသားစုနောက်ခံကနေမှသာသူ့ကိုဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်တဆင့်ကိုချိုးဖျက်ဖို့အဘို့နေဆဲခက်ခဲဘဝကိုရှာဖွေဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်ကြီးမားသောစေရန်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူမိမိတိုင်းပြည်, အင်ဒိုနီးရှားကျန်ရစ်တဲ့သူကသူ့အဖေ, Marius အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားလာပြည်နယ်မှဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် Marianus Nainggolan သတိပေးခံရ သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်အင်ဒိုနီးရှားပြန်သွားပါ။ သူ့သားနဲ့သမီးဘောလုံးထဲမှာကြီးမားတဲ့လုပ်သောစဉ်ယနေ့မိမိ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုချွတ်ပေးချေခဲ့သည်။ , Marianus ကိုယ်တော်တိုင်ဘာလီကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Piacenza မှာလည်း Radja တူသောအခြားအဘောလုံးသမားများမတူဘဲသူ၏ဖခင်နှင့်အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ အသင့်စားဆိုင်အလီ.
ယခုအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်းတွင် 2007 တစ်ဦးအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်fter တစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 13 နှစ်ပေါင်း။ "ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာနောက်တဖန်ဖြည့်ဆည်း။ Papa "ငါ့ကိုများနှင့် Riana ကြည့်ဖို့အီတလီနိုင်ငံမှဘာလီကျွန်းကနေလာ Radja သူ၏စိတ်နှလုံးသည်မိမိအဘ၏အပွစျမြားကငျြးပခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သူကပြောသည်။
မိခင်: Radja ရဲ့မိခင်ဇာစ်မြစ်အားဖြင့်ဘယ်လ်ဂျီယံဖြစ်ပါတယ်။ လက်မထပ်မီသူမကမူလက Lizi Bogaerts ခေါ်ခံခဲ့ရသည်။ Lizi Marius လက်ထပ်နှင့် Nainggolan မှသူမ၏အမည်သစ်ကိုရသောပြောင်းလဲသွားတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Lizi bearly သုံးနှစ်ကြာစွန့်ခွာခြင်းမှသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ပြန်လာပြီးနောက်, 2010 ၌သေကြ၏။ သူမသေဆုံးပြီးနောက် Radja မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၏သူမ၏ရက်စွဲများနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကျောအပေါ်နှစ်ခုကြီးမားသောအတောင်တက်တူး။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြင်ကြသကဲ့သို့ပင်။ တကယ်တော့, Radja သူ၏မိခင်မှလုံးဝကျိန် ဆို. ပူဇော်သည်သူ၏နောက်ကျောရှိပါတယ်။
အစ်မ: Riana Nainggolan သူမ၏အမွှာညီအစ်ကိုချင်း, Radja မှအကြီးတန်းအမွှာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်မေလ 3, 1988 ပေါ် Antwerp အတွက်သူမ၏အစ်ကိုထက်တစ်ရက်အဟောင်းတွေမွေးဖွားခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမွေးသူမ၏အစ်ကို၏ရက်စွဲ,4မေလ၏ 1988th ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံသူမ၏အစ်ကိုနဲ့တူ Radja ရဲ့အမွှာညီမ Riana Nainggolan ကိုလည်းအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်ရိုးမားရဲ့အမျိုးသမီးတွေဘောလုံးကွင်းဘက် AS များအတွက်ပါဝင်သည်။ သူမလည်းတစ်ချိန်ကကလေးတစ်ဦးအဖြစ်မရေရာသောအခြေအနေများအတွက်သူမ၏ပေမယ့်သူ့မိသားစုမသာကျန်ရစ်တဲ့သူသူမအဖေများကစွန့်ခွာသူမ၏ဇာတ်လမ်းဝေမျှပေးသည်။
ရိုးမား, Riana Nainggolan ကွှလာမီ နေဆဲတက်ကြွစွာဘယ်လ်ဂျီယံ, Kontich ၏အမျိုးသမီးဘောလုံးကလပ်များတွင်ကစားခဲ့သည်။ သူမသည်လူကြိုက်များမှသူမ၏အဖွဲ့သည်ဦးဆောင်ထားပါတယ် ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အမျိုးသားရေးပြိုင်ပွဲ။
အစ်ကို: အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ Manuel Noboa ၏ဝက်ညီအစ်ကိုဖြစ်၏ Radja Nainggolan ။ သူ့ကိုအကြောင်းကိုသိရန်ပထမဦးဆုံးအရာ Naboa တစ်ချယ်လ်ဆီးပရိတ်သတ်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
Radja ဝက်အစ်ကို Manuel Noboa တစ်ကြိမ်သတင်းစာကိုပြောသည်ပြီ "ငါသည်မြောက်မြားစွာအခါသမယပေါ်မှာကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းလင်းသောရာ၌ခန့်ထားပြီငါ့ညီ Radja ချယ်လ်ဆီးကိုသွားသင့်ကြောင်း။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကသူ့စိတ်ထားများအတွက်စံပြပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူသိပ်ရောမမြို့ချစ်တော်မူ၏။ "
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တက်တူးထိုးအချက်အလက်
Radja Nainggolan, အငျဒိုနီးရှားအမြစ်များနှင့်အတူဘယ်လ်ဂျီယံ, သံသယမရှိ, ဖက်ရှင်သူဖြစ်၏။ 2014 အတွက်ရိုးမားမှာရောက်ရှိလာစဉ်ကတည်းကပင်သူ၏ဘောလုံးနံပါတ်များကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတိုးလာကြပါပြီ။ သူကသာကိုလယ်မှာမိမိဂိမ်းပေမယ့်အမှန်တကယ်မချိမဆံ့ဝေဒနာနှင့်အတူကြွလာတော်မူသောတကိုယ်လုံးအပေါ်သူ၏သာမန်ထက်ရူပနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောတက်တူးအဘို့အထွက်မခံမရပ်ပါဘူး။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တက်တူးထိုးစုစည်းမှု
အတော်ကြာအင်တာဗျူးမှာတော့သူအပေါင်းတို့သည်သူ၏တက်တူးထိုး၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်နှင့်သူတို့ကသူ့ကိုအထူးဖြစ်ကြောင်း, မိမိနှောင်းပိုင်းတွင်မိခင်ထံအပ်နှံအထူးသဖြင့်သူတို့အကြောင်း။ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်
မိမိအဆံပင်မှာရှာဖွေနေဘေးဖယ်, ငါတို့ Radja Nainggolan ၏ထိပ်တန်း-Down radiography ပြုလျှင်, ငါတို့သည်တက်တူးအပြည့်အဝပရဒိသုငျတှေ့အချို့ဖတ်တော်မူသောလည်ပင်းပေါ်တွင်တဦးတည်းတူသောလူသစ်တွေကဖုံးလွှမ်းခံပြီ "အစ" (စ) ။ ဒါ့အပြင်သူက Piacenza မှာသူ၏ပထမဦးဆုံးဂိမ်းကစားဘယ်သူကိုနှင့်အတူနံပါတ်များကိုရောမမှာရှိတဲ့နေ့စွဲကြောင်းလိုင်းများအဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံ၏လည်ပင်းတစ်ပျံနှလုံးဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ;
မိမိအကိုယ်ထည်မှတဆင့်ပြေးနှင့်အကြားမှာရှိတဲ့သူအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ဦးတက်တူးရှိကြောင်းရှည်မြွေရှိပါသည်: "ဟန်ဆောင်စရာမလိုဘဲနေထိုင်ပါ။ မူတည်. မပါဘဲချစ်ကြတယ်။ ခုခံခြင်းမရှိဘဲနားထောင်ပါ။ "ဖောက်ပြန်တဲ့သူမရှိဘဲအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ။ မြွေအထက်တွင်အောက်ပါစာသားကိုရှိပါတယ်: "တစ်ဦးကအသက်, တဦးတည်းဆန္ဒ" (One ကိုအသက်, တဦးတည်းဆန္ဒ) ။
Nainggolan သည်သူ၏လက်ဝဲလက်မောင်းနှင့်အောက်တွင်ပြနေတဲ့ဗုဒ္ဓအပေါ်တစ်ဦးအစိမ်းရောင်တဲကိုရှိပါတယ်။ တဲတော်အထက်တစ်ဦးကြာပန်းပွင့်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသမီး၏အမည်ရှိပါတယ် "ALISA" လက်ဝဲလက်မောင်းနှင့်အတော်ကြာကြယ်များကိုလက်ဖျံပေါ်မှာ။ အတူတူလက်မောင်းမှာ Elvish ဘာသာစကားမှာသူ့မိခင်၏အမည်ရှိပါတယ်။
လက်မနှင့်နီးစပ်သော, Radja အချို့အန်စာတုံး, အတူတစျခုရှိပါတယျ အရေအတွက်အား5နှင့်အခြား (မေ, မိမိဘွားတစ်လအဓိပ်ပာယျ), အရေအတွက်အား 4(အဓိပ်ပာယျသူမေလ 4th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်) ။ သူလည်းပြောပါတယ်သည့်ကမ္ပည်းရှိပါတယ် ... (ကျနော်အနိုင်ရကိုချစ်) "အနိုင်ရ Love" သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ပေါ်မှာ။ မိမိလက်ျာလက်တွင်, ဒီလိုဖော်ပြထားကြောင်းတဦးတည်းလည်းမရှိ ...(ငါဆုံးရှုံးဖို့မုန်း) "ဆုံးရှုံးဖို့အမုန်း".
Radja ကသူ့ခြေထောက်ပေါ်လျော့နည်းတက်တူးထိုးရှိပါတယ်။ လက်ျာပခုံးမှာတော့သူကတစ်ဦးထုပ်နှင့်အတိုကောက် RN4 နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းတက်တူးသိရသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော pic ကိုပိုမိုမြင်သာသည်သူ၏လက်ဝဲဘက်ပေါင်ပေါ်မှာကြောက်စရာနဂါးဖြစ်ပါတယ်။
နွားသငယ်ကိုခုနှစ်တွင်သူအရေအတွက်က4အတူအမည်ပြောင် '' Ninja ကို '' ရှိပါတယ်။ မိမိအ Shin ခုနှစ်တွင်တရုတ်နှင့်ခြေကျင်း၌သူ၏အမွှာညီမဒေါ်လာစျေး၏သင်္ကေတ၏အမည်ပါရှိသည်နှင့် "လို့ Las Vegas".
လက်ဝဲခြေထောက်အတွက်သေးငယ်တဲ့လက်ဝှေ့သမား (lateral) နှင့်ရှေ့မှောက်၌တပါးမျက်စိနှင့်အတူဓားပါရှိသည်။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Radja Nainggolan သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
အားသာချက်: သူကသူ့သာမန်ထက်ရူပရှိနေသော်လည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောလူနာ, လက်တွေ့ကျသော, တည်ငြိမ်သည်။
အဘယ်အရာကို Radja likes: တက်တူး, ထူးခြားတဲ့ဆံပင်ရှိခြင်း, ဥယျာဉ်, ဂီတ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, အရည်အသွေးမြင့်အဝတ်နှင့်လက်နှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြည့်ရှုသည်။
Radja နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများမဆိုကြင်နာ၏မလုံခြုံမှုများနှင့်ဒြပ်အထည်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, Radja လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကောင်းစွာ-ရပ်နားထားရသည်။ သူကသူ့လုပ်အား၏အသီးအပွရိတ်ဖို့ချစ်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်။ သူဟာမေတ္တာနှင့်အလှအပကဝိုင်းခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရနှင့်ထိတွေ့စဉ်းစားအပေါင်းတို့နှင့်အာရုံ၏အရေးအပါဆုံးမြည်းစမ်း။ Nainggolan သည်းခံရ၏, သူကိုယ်ရေးကိုယ်တာစိတ်ကျေနပ်မှု၏အချက်ရောက်ရှိတိုင်အောင်သူ့ရွေးချယ်မှုကပ်ဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
သူလည်းသူကမကြာသေးမီကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိအလေ့အကျင့်၏ဘယ်လ်ဂျီယံနည်းပြရောဘတ်တို Martinez အားဖြင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်အစီရင်ခံစာများကြားတွင်စီးကရက်ဆေးလိပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအမိန့်တော်ရှိ၏။
'ငါဆေးလိပ်သောက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပေါ့ငါငါ့ဥစ္စာ၏ဤအလေ့အထကိုဝှကျထားဖူးပါဘူး' ' Nainggolan အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံလေ့ကျင့်ရေးစခန်းအပြင်ဘက်တွင်သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့သည်။ "ငါကလေးတွေရှိသည်, ငါအကောင်းတစ်ဦးစံနမူနာသငျ့သညျကိုသိ ... ဒါပေမယ့်ကိုယ့်တစ်ဦးဘောလုံးသမားပေါ့ကျွန်မရဲ့အလုပ်လုပ်ပါ။ လူတိုင်းကိုယ့်ဆေးလိပ်သောက်သိတယ်ငါဝှက်ထားလို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radja Nainggolan ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
မာ့ခ်ဒဲလ်လီကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Axel Witsel ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Mertens ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်ခန်းခြောက်
ဇန်နဝါရီ Vertonghen ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Thibaut Courtois ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဗင်းဆင့် Kompany ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဧဒင်ဥယျာဉ်ဇက်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်